Rasaasa News – Shirkii Somalida London Loogu Qabtay, oo Lacago Badan Lagu Yaboohay.
on May 7, 2013 10:31 pm
Shirkii mudada dheer la sugayey in loo qabato taageerada dalka Somaliya, ayaa maanta ka dhacay magaalada London.
Shirka oo ay ujeedadiisa ugu wayn ahayd sidii dhaqaale loogu uruurin lahaa dalka Somaliya, ayaa waxaa ka soo qaybgalay 54 wadan. Shirka waxaa warbixin kooban oo qorshihiisa waxqabad ee mustaqbalka ah laggaga dhagaystay madaxwaynaha Somaliya.
Dalka Somaliya oo muddo 22 sano ah uu ka socday dagaal ku salaysan qabiil, kaas oo kolkii dambe cagaha la galay argagixisnimo ayey aduunyadu wax xal ah u wayday. Waxay aduunyadu maal badan ku bixisay ciidamo ka socda Afrika oo la dagaalama argagixisada, si ka dibna xal caga dhiga oo siyaasadeed loogu helo dalka Somaliya.
Shirka maanta ka dhacay magaalada London oo ah kii ugu dambeeyey ee loo qabto dalka Soamliya, waxaa ka muuqatay khilaaf aan qarsoonayn iyo heshiis la,aanta siyaasadeed ee ka jirta dalka Somaliya.
Waxaan gabi ahaanba shirka ka soo qayb galin, laguna martiqaaday maamul gabaleedyada ka jira dalka Somaliya. Arintaas oo ay dawlada Ingriisku isku dayday in ay shirka keento dhamaan maamulada dalka ka jiro, shirka ka hor, nasiib daro way ku guuldaraysatay.
Intii uu socday shirka London waxaa hadheeyey banaanbax aad u wayn oo muujinaya qaybsanaanta siyaasadeed ee ka jirta dalka Somaliya gudo iyo dibadba.
Dhinaca kale waxaa ka dhacay magaalooyinka dalka Somaliya banaanbaxyo isugu jira taageero iyo lid xukuumada Somaliya ee gacan ku samayska ah.
Dagaalka sokeeye ee dabada dheeraaday ee dalka Somaliya, waxaa barbar socda dano siyaasadeed oo dalalka aduunka. Dawlada Ingriiska oo aan danayn jirin dhibaatada Somaliya, sanadkii 1993 waxay diiday in ay faraha la gasho qalalaasaha Somaliya, ayaa haatan u tafo xaydan dajinta dalka Somaliya.
Dalka Turkiga ayaa meel gaaban kaga soo booday siyaasada dalka Somaliya, isaga oo xalkeeda ka abaaray magaalada Muqdisho kaliya. Danaysiga gaarka ah iyo awood siinta cid gaar ah ayaa fogayn karta dhibaatada iyo burburka ka jira dalka Somaliya. Qaramada midoobay ayaa dhawaan qayb ahaan fasaxday cunoqabataynta hubka ee saaran Somaliya, waxaana la filayaa in hub hor leh uu galo gacmaha maamulada Somalida, ka dibna ay isu adeegsadaan.
Shirkii maanta oo aanay wali wax qodob ah ka soo bixin ayey wararka hor dhaca ah ay sheegayaan in lagu yaboohay lacago. Dalka Ingriiska oo martgaliyey shirka ayaa ku yaboohay US$50 million, USA $40 million, Denmark US$75 million, Turkiga US$10 million iyo Qatar US$ 18million. Lacagaha maanta la yaboohay ayaan loo dhiibi dooninxukuumada laakiin ay maamulidoonaan deeq-bixiyaashu.